Otu esi etinye Skype na Linux Mint 20 - LinuxCapable
Otu esi etinye Skype na Linux Mint 20
Satọdee, Nọvemba 13, 2021 by Jọshụa James
Usoro 1. Wụnye Skype na APT
Usoro 2. Wụnye Skype na Snapcraft
Usoro 3. Wụnye Skype na Flatpak
Otu esi ebido Skype Client
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Skype na Linux Mint 20.xx.
Nzọụkwụ mbụ ịwụnye Skype na desktọpụ gị bụ ibubata ebe nchekwa na Skype.
gpg --no-default-keyring --keyring ./skype_signing_key_temp.gpg --export > ./skype_signing_key.gpg
gpg: keybox './skype_signing_key_temp.gpg' created
gpg: key 1F3045A5DF7587C3: public key "Skype Linux Client Repository <se-um@microsoft.com>" imported
Ọ bụrụ na iwu a dị n'elu anaghị arụ ọrụ nke ọma, ị gaghị enwe ngwugwu curl arụnyere.
Iji tinye curl, jiri iwu a.
Nke abuo, bubata ebe nchekwa Skype site na iji iwu a:
Iji hazie ebe nchekwa isi mmalite, ị ga-emerịrị ndepụta isi mmalite njikwa ngwugwu dabara adaba iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ tupu nrụnye Skype. Iji mee nke a, gbanye iwu a na njedebe gị:
Ugbu a tinye Skype na iwu a:
sudo apt install skypeforlinux -y
Ozugbo echichi zuru ezu, ị nwere ike nyochaa echichi site na iji iwu amụma apt-cache.
A ga-edozi mmelite maka Skype site na nkwalite dabara adaba na iwu nkwalite.
Iji wepu ngwanrọ Skype na sistemụ gị, mee iwu na-esonụ na ọdụ gị:
sudo apt autoremove skypeforlinux -y
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/skype-*
sudo rm /etc/apt/trusted.gpg.d/skype_*
Nhọrọ nke abụọ bụ iji njikwa ngwugwu Snap. Ndị ọrụ Mint Linux nwere ike mara Snap ka ọ na-emepụta ma na-echekwa ya site na Ubuntu; agbanyeghị, ọ naghị abịa n'ụdị arụnyere na sistemụ gị. Agbanyeghị, enwere ike itinye nke a ngwa ngwa.
Nke mbu, wepu iwu Linux Mint nke na-adighi nma ka edobe onwe ya na Ubuntu.
2021-11-13T14:42:28+08:00 INFO Waiting for automatic snapd restart...
Ozugbo etinyere faịlụ ndị bụ isi nke ọma, malitegharịa ọrụ snap gị.
skype 8.78.0.161 from Skype✓ installed
Ị ghaghị ịmalitegharị nnọkọ gị ma ọ bụrụ na akara ngosi ahụ efuola!
Ileghara ihe dị n'elu anya ma ọ bụrụ na akara ngosi Skype dị. Mgbe ụfọdụ ahụhụ a nwere ike ime mgbe ị na-etinye ngwungwu ọhụrụ.
Nhọrọ nke atọ bụ iji njikwa ngwugwu Flatpak. Linux Mint achọghị ịwụnye Flatpak ka ọ na-abịa na ndabara na sistemụ gị. Nke a bụ nhọrọ ọzọ ewu ewu dị ka Snap.
Nke mbụ, ịkwesịrị ịme ka Flatpack maka Linux Mint jiri iwu na-esonụ na njedebe gị:
Were ya na iwu dị n'elu anaghị arụ ọrụ n'ihi enweghị Flatpak. Tinyegharịa njikwa ngwugwu site na iji iwu na-esote n'ọnụ ọnụ gị.
Ugbu a tinye Skype site na iji iwu flatpak a:
Flatpack na-edozi mmelite na-akpaghị aka oge ọ bụla ịbanye na sistemụ gị. Maka ndị ọrụ chọrọ iji aka ha lelee maka mmelite, jiri iwu a.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu ụdị Flatpack nke Skype, mee iwu a:
flatpak uninstall --delete-data com.skype.Client
Ugbu a ị nwere onye ahịa Skype arụnyere, ịmalite ịmalite nwere ike ime n'ụzọ abụọ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmalite Skype wee jiri ọdụ, ziga ya na ndabere:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ogwe ọrụ> Ịntanetị> Skype. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Ugbu a, a ga-akpọrọ gị gaa na ihuenyo nbanye ngwa Skype. Banye ma ọ bụ mepụta akaụntụ ọhụrụ.
Ma nke ahụ bụ ya! Ị tinyela Skype nke ọma na desktọpụ gị.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye Skype na Linux Mint 20.xx. N'ozuzu, Skype na-enye gị ohere ịme ma vidiyo na oku olu na kọntaktị nkeonwe na azụmahịa gị. Skype nwere ike ịbụ ngwá ọrụ bara uru n'etiti ọtụtụ maka mkparịta ụka n'etiti otu ma bụrụkwa onye ndu ahịa.
Categories Mint Linux Tags Mint 20 Mint Linux, Skype Mail igodo
Otu esi etinye ihe nchọgharị Chromium na Fedora 35